FDA kwadoro Lorcaserin HCL Maka Ọgwụgwọ Ibu
1. FDA kwadoro ọgwụ ọjọọ: Lorcaserin HCL
2. Nchịkọta Nzuzo nke Lorcaserin (846589-98-8)
3. Usoro ihe omume nke Lorcaserin
4. Esi mee ka Lorcaserin
5. Omume efu
7. Mgbakwunye ndị ọzọ na-agbanye Mgbe Lorcaserin nọ
8. Mmetụta mmetụta nke Lorcaserin
9. Nchekwa nke Lorcaserin
10. Nkịtị Kwesịrị Ekwesị nke Lorcaserin
11. Nkọwapụta nke Lorcaserin site na oke
12. Ntinye nke Lorcaserin
13. Ịzụta Lorcaserin HCL Online
14. Nchịkọta Na Lorcaserin HCL (Belviq)
FDA kwadoro ọgwụ ọjọọ: Lorcaserin HCL
Ị na-achọ ụzọ dị nchebe ị ga-esi kwụsị ịdị arọ nke anụ ahụ n'ebughị ụzọ na-eche banyere arụmọrụ siri ike ma na-adịghị arụpụta ihe? Gbalịa ọgwụ ọjọọ ọgwụ ọjọọ. Chọpụta ma ọ dị irè ka mgbakwunye ahụ dị, usoro mgbasa ozi nke ime ihe, na ihe kpatara ya ji nweta nkwado nke FDA.
Dị ka ọ dị ugbu a, ihe dịka 31% nke ndị bi na United States bụ oke ma ọ bụ oke ibu. Ihe ndekọ ndị ọzọ na-egosi na 69% nke ndị toro eto bụ ndị karịrị 20 afọ dị oke ibu ma ọ bụ oke. Nke a pụtara na n'ime ụmụ 10 niile nọ n'afọ a, ị nwere ike ịdọrọ ndị 6. Banyere 30% nke ndị ọkà mmụta sayensị dị oke ma ọ bụ oke ibu.
Nanị ụzọ e si edozi oke ibu bụ site n'ịrụ ọrụ mgbe nile, atụmatụ iri nri, ịwa ahụ nke eriri afọ, ma ọ bụ iji ọgwụ ọjọọ emefu. Ọ bụ ezie na mkpụrụ ọgwụ ndị na-egbuke egbuke dị nnọọ irè n'ịwụfu pound ole na ole, ha ejikọtawo na mmebi valve obi. E wezụga nke ahụ, enwere ọtụtụ nchegbu gbasara ohere nke nsogbu ahụike.
Ruo mgbe 2012, mgbakwunye ụlọnga, nke a makwaara dị ka Belviq, abughi obere ọgwụ ọgwụ mgbochi n'ihi ọrịa ndị ahụ na-adịghị edozi anya. Ma mgbe ahụ, nnyocha e mere na United States maka ọtụtụ ndị gosiri na ọgwụ a dị mma ma dị irè n'enweghị ezigbo ahụ ike na obi mmadụ. Ndị na-eji ya nwere ike idafu 5 -10% nke ụbụrụ ha, ma ọ bụrụ na ha na-eme ihe anụ ahụ na nri calorie dị ala.
Obesara vs. ibu
Ntre, nso idi ukpụhọde ke ufọt ibu ye ibu? Ọ bụrụ nchịkọta ahụ gị (BMI) karịrị 30kg / m2, mgbe ahụ, ibu oke. Ọ bụrụ na akọrọ akpọrọ n'etiti 25 na 29.9kg / m2, nke ahụ bụ ibu arọ. Kedu Ka Synephrine HCL Si Arụ Ọrụ Gị?
Ebumnuche nke oke ibu abụghị ihe doro anya kama ihe mere eji eme ihe banyere mkpụrụ ndụ ihe nketa, usoro ihe atụ, usoro ọmụmụ, na omume. Ọdịiche nke ọnọdụ a na-eduga n'ọrịa ọrịa shuga, ọrịa obi, hyperlipidemia, apnea, ọrịa imeju oke, ọbara mgbali elu, na ụfọdụ ọrịa cancer.
Ọmụmụ Ihe Amụma nke United States kpughere Ahụhụ Na-edozi Obi nke Lorcaserin
FDA adabereghị na iji mgbazinye lorcaserin mee ka ọ dị mkpa ma ọ bụ na ọ dị irè iji kwụsị ibu ibu. Ihe bụ isi nke dugara ná nkwado ya bụ nchọpụta bụ isi nke United States nke e mere na 3.3 afọ.
N'ihe gbasara ọmụmụ ihe e nyere The New England Journal of Medicine, ịdọ aka ná ntị na-egosi na ọ bụ ọgwụ a pụrụ ịtụkwasị obi maka nchịkwa dị arọ maka ndị ọrịa buru ibu ma buru ibu.
Ndị nchọpụta ahọpụta ndị ọrịa 12000 a na-ahọpụtaghị na ọ bụghị naanị oke oke kamakwa ndị nwere ọrịa obi dị iche iche. Site n'ìgwè a, e kenyere ndị ụfọdụ ka ha nweta kwa ụbọchị lorcaserin usoro onunu ogwu ebe ndị ọzọ were ebebo.
Mgbe otu afọ gasịrị, 39% nke ndị ọrịa a na-ekwu okwu na 17% nke ndị na-ahụ maka ebe a na-edekọ ma ọ dịkarịa ala 5% nke ọnwụ. Dị ka à ga-asị na ezughị ezu, ìgwè ndị uwe ojii nọ n'ọnọdụ dị ala nke ịmalite ịrịa ọrịa shuga ọ bụ ezie na ụfọdụ patent ga-ejedebe na hypoglycemia siri ike.
Mgbe e mere ihe atụ n'etiti ndị na-etinye ọnụ na ndị nọ na placebo, ọ dịghị ihe ndekọ nke nsogbu gbasara ọrịa obi na otu ọ bụla. Naanị ihe ndị ahụ na-eme ka ọ ghara ịdị njọ ma e jiri ya tụnyere ụzọ ndị ọzọ.
Ọkpụkpụ nkwonkwo nke Lorcaserin na Obi
Ya mere, gini mere ndi mmadu ji zuta echiche a bu na emekorita okwu na ihe ojoo nke obi? Ka m kọwaa ...
E nwere ụdị 14 dị iche iche na-anabata 5-HT na sistemụ mmadụ. N'ịbụ onye agonist 2C nke serotonin, nyocha na-ele 5-HT anya2C ndị nabatara usoro nchebe nke etiti. Ma mgbe ahụ, a na-ejikọta onye nnata a na 5-HT2B na 5-HT2A ndị natara.
Nke a bụ ikwu na, ọ bụrụ na 5-HT2C a kpaliri, ndị ọzọ na-anabata ihe nwere ohere zuru oke na-arụ ọrụ. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị na ọgwụ ndị na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa serotonin, ya mere, nsogbu nke valve obi na mgbatị ọbara mgbatị n'etiti ndị ọrụ.
N'okwu a, mmekọrịta nke lorcaserin na 5-HT2C bụ 100x karịrị 5-HT2B ndị natara. Nchịkọta ụbọchị ọ bụla bụ maka ọrụ dị mma. Ọ bụrụ na ị kwụghachị, ị ga-agafe na njedebe ma ego ọzọ ga-agbakwunye ndị ọzọ natara. Ọ bụ na mmalite nke 5-HT2B akpata ọrịa obi valvular, ihe na-akpali 5-HT2A eme ka mgbanwe uche, mmetụta 'elu', euphoria, na hallucinations.
Ugbu a, ọgwụ ọjọọ ọgwụ ọjọọ bụ nanị ọgwụgwọ nke na-akpali 5-HT2B n'ejighị ọbara mgbapụta ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
Nchịkọta nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) bu ụzọ kweta na Belviq nyere ndị okenye nọ na 2012 ọgwụ. Ihe ikike a mere afọ atọ mgbe Arena Pharmaceuticals na Eisai Inc. gbara akwụkwọ NDA (Ngwa Ọgwụ Ọgwụ ọhụrụ) maka Lorcaserin. O weghaara FDA afọ abụọ iji nweta data ahụ, tinyere ihe ọmụmụ gbasara ọmụmụ ihe metụtara lorcaserin, tupu ikpe ikpe ikpeazụ.
Kemgbe ihe dị ka afọ iri abụọ ugbu a, Belviq na-anọchite anya mpempe akwụkwọ FDA. Ọ bụ ezie na ọ bụ ọgwụ eji ede ọgwụ ikike na United States, a kwadobeghị ya na Europe.
Nchịkọta Nzuzo nke Lorcaserin (846589-98-8)
Lorcaserin hydrochloride bụ ihe onwunwe nke òtù nke agonists na-ekesa serotonin. Ọ bụ chemical na CAS 846589-98-8
Ka anyi ghota ihe omuma a ...
Aha aha (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
CAS ọ dịghị. 846589-98-8
Ebe na-agbaze (Celsius C) 193 - 200
molekụla ibu 232.15
molekụla usoro C11H15Cl2N
Solubility (25 Celsius C) Mmiri
nchekwa okpomọkụ -20 (Celsius C)
Action Serotonin 2C Onye na-eme ihe nchịkwa
ojiji Okenye ndị okenye
Rịba ama na lorcaserin hydrochloride bụ ụlọ ahịa ọgwụ-ọkwa. Ọ bụ ezie na ọ na-enweta ngwa ngwa n'ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ọgwụ, a ghaghị iji ya mee ihe maka nchọpụta nyocha, mmepe, na nzube nchọpụta ọgwụ. Ọ bụghị maka iji mmadụ eme ihe, ya mere, ọ bụghị onye ruru eru maka ire ndị ọrịa.
Lorcaserin HCL Nchịkọta Data Nchedo
N'ikwekọ na usoro GHS dị iche iche, lorcaserin hydrochloride bụ ụdị ihe ọkụkụ IV. Ọ na-eburu Koodu; H302, P264, P301, P312, na P330. O nwere ike ịbụ ngbu site na ilo, inhalation, ingestion, ma ọ bụ na kọntaktị kpọmkwem na anụ ahụ.
Enyemaka Enyemaka Mbụ
Ọ bụrụ na ị na-eri nri, gbanyụọ ọnụ onye ahụ na mmiri dị ọcha. Gaa n'ihu nchịkọta maka nchịkọta 15 sochirinụ, ọ bụrụ na onye ahụ maara. Egbula ịnye ọ bụla nlekọta ọnụ ma ọ bụrụ na mmadụ amaghị.
Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na akpụkpọ anụ ahụ, jiri mmiri dị ọcha na ncha dị nro na-ekpuchi. Ọ bụrụ na anya, jiri mmiri mmiri na-ehicha ha maka ihe dịka 15 nkeji. Ọtụtụ ụlọ ọrụ nyocha na-arụ ọrụ nke ọma etinyewo mma nchekwa na anya maka mma iji mezue mmeghachi omume mberede.
Ọ bụrụ na onye na-agba ahụhụ na-etinye HCL aka, nyefe ha n'ime ụlọ nke nwere ikuku ọhụrụ. Ọ bụrụ na iku ume na-esi ike, jiri respiration artificial na-achọ enyemaka ahụike.
Were akwa mkpuchi, mkpuchi nchebe, na ogwe aka na-eguzogide ọgwụ. Nakwa, jiri respirator, nke NIOSH kwadoro.
Ijikwa na nchekwa
Ejila ọkụ, uzuzu, uzuzu, ịgba, ma ọ bụ ihe ọ bụla ụgbọelu dị na laabu. Debe oge ikpughe dị ka o kwere mee. N'oge nchekwa, hụ na ịchekwa mkpọtụ na akpa akara ma kpochie ya n'ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Lorcaserin bụ ebe enwere ike na-achịkwa ọnọdụ. Otú ọ dị, ị ga-ahapụ ya pụọ ​​na ndị na-eme ihe ike dị ka ọ nwere ike ịkpalite mmebi ngwaahịa. Ndị na-emepụta ihe ndị ahụ bụ oxides nke nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, na hydrogen chloride.
Usoro ihe omume nke Lorcaserin
Lorcaserin bụ onye na-anabata aghara aghara nke 2C serotonin. Ọgwụ ọjọọ nwere njikọ dị elu maka mmadụ 5-HT2C. Ọ na-achọpụta kpọmkwem kemịkal na hypothalamus, bụ ndị na-akpata agụụ.
Kwe ka m kọwaara ya na ndị ọkà mmụta sayensị ... Belviq na mmekọrịta nke Central Nervous System (CNS), kpọmkwem na hypothalamus. Ọgwụ a na-achọ 5-HT2C ndị na-anabata ihe, bụ ndị a na-ahụ na pro-opiomelanocortin neurons n'ime oghere ahụ. Omume a na-eme ka ntọhapụ nke MS-alpha-MSH, nke bụ hormone na-eme na melanocortin-4-receptors iji gbochie agụụ mmadụ. Akụkụ ụbụrụ a na-achịkwa agụụ dị otú ahụ na mgbe a gbanyere ya n'ọrụ, ọ ga-egosi ahụ na ị juputara oge.
Mgbe e were ya, ọgwụ ahụ na-ebelata nri nri ma na-eweta mmetụta nke satiation. Ọ bụ ezie na ị ka ga-eri nri na-edozi obere ala kaadị, Belviq ga-ejide gị. Ị ga-ejupụta na iri nri ntakịrị. Na-eduzi na Uru Uru na Egwu Ejila
N'ịbụ onye agụụ na-agụsi agụụ ike, ọgwụgwọ ahụ na-eme ka ọnụ ọgụgụ dị arọ na ndị ọrịa buru ibu na ndị buru oke ibu. E wezụga nke ahụ, ọ na-enyere aka ịchịkwa ụfọdụ ọnọdụ metụtara ibu dịka ọbara mgbali elu, ọrịa obi, na ọrịa shuga nke ụdị II.
Maka ọgwụ a ka ọ dị irè, onye ga-etinye ihe ndị dị n'ime anụ na usoro nri nri dị mma na usoro ha. Enweghị nri pụrụ iche iji soro ma ịrapara na calorie dị ala nwere ike ịba uru. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu na-agwa gị okwu n'ime afọ zuru ezu, ị ga-atụfu 3.5% nke ụbụrụ gị mbụ.
Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ okwu ndị na - adịghị adị na - eme ka ọgwụ ahụ ghara inwe mmetụta ọ bụla. Were, dịka ọmụmaatụ, ị ji ikwesị ntụkwasị obi na-eji ọgwụ ahụ eme ihe maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa atọ, mana enweghi mgbanwe ọhụụ na ahụ gị. Ọfọn, nke a bụ isi ebe ị kwesịrị ịkwụsị ịgwọ ahụ ma zọpụta onwe gị pụọ na nhụsianya ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịlafu pound dị mma n'izu nke iri na abụọ, enweghị olile anya ị ga-erite uru na ọgwụ ọzọ.
Esi mee Lorcaserin
Dị ka ụkpụrụ FDA si edozi, ọ bụ nanị ndị toro eto ga-eji ụbụrụ na-eme ihe gbasara ụbụrụ (BMI) nke 30kg / m2 na n'elu. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga nke ụdị II nke ọbara arọ, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ ọrịa obi, ị ka nwere ike ịṅụ ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na BMI gị dịkarịa ala 27kg / m2.
Ozi Belge nke Belviq
Onye ọrịa ahụ kwesịrị iji ọnụ kwuo otu mbadamba 10mg ugboro abụọ kwa ụbọchị dị ka ntụziaka nke onye dọkịta. Dị ka o kwesịrị, ị kwesịrị ị na-enye ọgwụ ahụ na oge etiti oge. Gbanye mbadamba mbadamba nkume n'enweghi mgbu ma obu kpochapu ya. Ị nwere ike ma ọ bụ jiri ọgwụ ma ọ bụ na-enweghị nri rie ma ọ bụ ndụmọdụ dọkịta.
Ọ bụrụ na ịnataghị ntụziaka zuru ezu site na dọkịta gị, ị nwere ike ikwenye mgbe niile na aha njirimara. Akwụsịla ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọbụla na-erughị ihe edepụtara gị ebe ọ bụ na ị nwere ike igbochi ya.
A na-atụ aro ka ị gaa Belviq n'oge ndụ ya niile iji gbochie ọrịa ụfọdụ metụtara ọrịa. Ọ gwụla ma dọkịta gị adụ ọdụ, ịkwesịrị ịkwụsị ya na-ekwu okwu usoro ogwu.
Ị na-atụ uche ọgwụ ọgwụ? Naanị buru ya ozugbo nke a chechara gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ dịlarị oge maka usoro onunu ọzọ, dị na-agbaso usoro ihe omume gị ma chefuo banyere ụbụrụ a tụfuru.
Ọ bụrụ na ị na-etinye onwe gị karịa ihe mbadamba nkume nke Belviq, ị ga-enwe ike ịnata ụfọdụ mgbaàmà siri ike na mmetụta ndị ọzọ mgbe e mesịrị. N'ihe banyere nnyefere, dobe akara na nchịkwa nchịkwa ozugbo tupu ọgwụ amalite amalite ịmetụta ya n'ahụ gị. Nọmba ọnụọgụgụ bụ 1-800-222-1222.
Ụfọdụ n'ime ihe mgbaàmà nwere ike ịgụnye mgbanwe ngbanwe, obi nhịahụ, ọgbụgbọ, mmetụta dị elu, mgbu obi, isi ọwụwa, ma ọ bụ mmebi ahụ. N'ọnọdụ ndị dị oke dịka nkedo, nsogbu ike iku ume ma ọ bụ ịdaa, gbanye 911 maka ọrụ mberede. Gịnị mere Sibutramine ji ewu ewu na ọnwụ?
Enwere okwu ole na ole ebe a ga-emejọ ụbụrụ. Nnukwu doses nwere ike ime ka onye ọrụ ahụ "dị elu" ma mee ka ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọ dị ndụ. Ọ bụ ịkpa àgwà na ya nwere ike ime ka ịdabere na ọgwụ ọjọọ. N'ihi nke a, Nchịkwa Ndị Na-ahụ Maka Mgbochi Ọgwụ ahụ ekewapụtala ya dị ka ihe atụ nke oge IV.
Mgbochi Mgbochi Mgbe ị na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa cancer na-akpata ọrịa cancer
Tupu iwere Lorcaserin (Belviq)
Mmekorita ndi puru ime
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọgwụ ọ bụla na-arịa gị. Site n'enyemaka nke onye na-ahụ maka ọgwụ, gosi na ntụziaka ntụziaka ma ọ bụrụ na ihe ndị dị na ụbụrụ nwere ike ịkpalite mmeghachi omume na-adịghị mma.
Ọ bụrụ na ị nọ na ọgwụgwọ ọzọ, gụnyere, ndenye ọgwụ, ndenyeghị ọgwụ, ma ọ bụ ọgwụ osisi, hụ na ị ga-agwa ndị ọkachamara. Nke a dị oke mkpa dị ka ọ na-enyere aka ịmepụta ohere nke ọgwụ ọjọọ na mmekọrịta na otú o si emetụta ọgwụ pharmaodynamics nke ụbụrụ na ahụ. N'ihi ya, a ga-amanye dọkịta ahụ ka ọ gbanwee usoro ọgwụgwọ ọrịa gị na-agwọ ọrịa shuga ma legide anya na mmetụta ndị dị na ya.
N'iji ọgwụ, ọgwụ ọjọọ n'etiti Belviq na ọgwụ ndị ọzọ nwere ike ịdị egwu. Ihe atụ ndị a na-ahụkarị bụ ọgwụ ndị e nyere maka mpụga, ịda mbà n'obi, oyi, ma ọ bụ ọrịa uche. Nke a bụ ndepụta zuru ezu nke ọgwụ na ọgwụ ọgwụ iji tinye na foto a;
Tricyclic antidepressants (TCAs) dịka nortriptyline, trimipramine, protriptyline, amitriptyline, doxepin, clomipramine, amoxapine, ma ọ bụ imipramine
Ndị na-eme ihe nchịkwa serotonin (SSRI) dịka fluoxetine (Sarafem), sertraline, paroxetine (Paxil), escitalopram, citalopram, na fluvoxamine
Dextromethorphan (nke a na-ejikarị agwọ ọrịa)
Ndị nkwụnyexine (refetake) (SNRIs) nke gụnyere ntinpinefrine (Effexor) na duloxetine
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) dị ka linezolid, tranylcypromine, methylene acha anụnụ anụnụ, isocarboxazid, selegiline, na phenelzine
Ọgwụ ndị na-abaghị uru dị ka wort na tryptophan St. John
Ọgwụgwọ maka dysfunction
Ụdị ọgwụ shuga dị ka insulin
Rịba ama na ụda olu na-eme ka ndị ọrịa buru oke ibu. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị ọrịa shuga nke Abụọ, ị na-ahụ na ị na-ahụ ọbara shuga dị ala mgbe ị na-ewere ọgwụ. Ya mere, ị kwesiri ịdị na-eleba anya n'ọtụtụ shuga shuga na ọbara gị ma nọgide na-agwa dọkịta gị okwu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị gbanwee usoro ọgwụgwọ.
Ọgwụgwọ maka ọrịa uche
Ọgwụ maka ịchịkwa isi ọwụwa migraine gụnyere zolmitriptan, sumatriptan, rizatriptan, frovatriptan, almotriptan, naratriptan, na eletriptan (Relpax)
Codeine (nke dị n'ụkwara ụkwara na ọgwụ mgbu)
Ihe mgbakwunye ndị ọzọ dị arọ-ọnwụ
Mee ka onye na-ahụ maka ọgwụ ahụ mara ihe mgbakwunye ihe oriri ọ bụla, ọgwụ, ma ọ bụ ihe ndị na-abaghị uru na ị na-ewere.
Ime ime na nọọsụ
O yiri ka Lorcaserin ọ bụ onye iro dị ukwuu maka nne. Mbadamba ụrọ ahụ abụghị maka gị ma ọ bụrụ na ị dịlarị ime ma ọ bụ na-eme atụmatụ ịmụọ nwa oge. Ọgwụ a nwere ike imerụ nwa ebu n'afọ gị nke na-eduga na ụbụrụ nwa ebu n'afọ. Ozugbo ị matara na ị dị ime mgbe ị na-ewere ọgwụ ahụ, kpọtụrụ dọkịta gị ozugbo maka ndụmọdụ ụfọdụ.
Ya mere, gịnị mere Belviq ji kwenye na ime ime? Ọ bụ n'ihi na ọnwụ dị arọ bụ igbu oge mgbe ime. Ihe ọzọ bụ na nchọpụta e mere na ụmụ oke kpughere na mkpụrụ ahụ na-ejedebe ọkwá dị arọ na ndụ ha dum.
O kwesịghị ime ka ara na-arahụ mgbe ị na-ekwu okwu. Ọ bụ ezie na enweghi akụkọ ndị a pụrụ ịdabere na ha iji kọwaa otú ọgwụ ga-esi gafee mmiri ara ara ma merụọ nwatakịrị ahụ, ọ ka mma ịnọ na nchekwa karịa mwute.
Ọnọdụ cell na nke ọbara
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu obi mgbawa na nsogbu ahụike metụtara ọbara ọbara, jide n'aka na ị gwara dọkịta gị. Ndị a gụnyere;
Ọrịa ọbara ọbara (na-emetụta mkpụrụ ndụ ọbara ọcha)
Otutu myelomas (na sel plasma)
Ọrịa Sickle cell (na-emetụta ụdị ọbara ọbara uhie)
Ụdị deformities (Peyronie ọrịa, mmeso, ma ọ bụ cavernosal fibrosis)
Ọrịa afọ ime
Mgbe ị na-ewere Lorcaserin
Nri na mmega ahụ
Belata calorie na nri gị ma gbalịsie ike na-eme ihe mgbe nile. Site na ime nke a, na-eme ka ahụike gị dịkwuo elu ma na-eme ka usoro ọkụ na-ere ọkụ. Lorcaserin na arụ ọrụ nke ọma.
Nyochaa ọbara shuga gị
Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga Ụdị nke Abụọ, mmetụta dị nro nke ụbụrụ nwere ike iduga n'ọtụtụ shuga shuga. Na-ekwusara akụkọ gị mgbe niile na dọkịta ga-edozi ma gbanwee usoro ọgwụgwọ.
Nọgide na-arụ ọrụ dọkịta gị
Ma ọ dịkarịa ala, dọkịta ga-elele ọganihu gị na ọgwụ ahụ, otu esi enweta usoro gị, ma nyekwa gị ndụmọdụ dịka ya.
Mgbakwunye ndị ọzọ na-agbanye Mgbe ị nọ na Lorcaserin
Gbanyee mbadamba ụrọ niile ma adalata, kewaa, ma ọ bụ kpochapụ
Emela ka usoro onunu ogwu. Maka Belviq, buru otu mbadamba nkume ugboro abụọ ma maka Belviq XR, otu mbadamba ihe zuru ezu otu ugboro kwa ụbọchị.
Jide n'aka na ị ga-ekpughere ọgwụ gị, ihe mgbakwunye, ma ọ bụ ngwaahịa ị na-ebu tupu ma ọ bụ mgbe ị na Belviq, na onye na-ere ọgwụ
Gbanyụọ ojiji nke ịkọ ụda ma ọ bụrụ na ịnataghị ma ọ dịkarịa ala 5% ọnwụ ọnwụ mgbe izu 12
Zere ịrụ ọrụ dị egwu ma ọ bụ ịkwọ ụgbọala, ebe ọ bụ na ọgwụ ahụ nwere ike igbochi itinye uche, ncheta, na ike ịṅa ntị. Naanị mee ya ma ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ụlọnga anaghị emetụta ọnọdụ uche gị
Ejila ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ị dị ime
Ghọta ihe ize ndụ ndị ị na-eburu na-ewere, mmetụta ya, mmeghachi omume ndụ, na uru. Ọ bụrụ na mgbaàmà ahụ dị njọ, chọọ nlekọta ahụike
N'ihe nile, zere ya mgbe ị na-enye nwa ara
adịghị jiri lorcaserinin Nchịkọta na ọgwụ serotonergic, dopamine antagonists, ma ọ bụ ihe oriri ndị ọzọ dị ka tryptophan. Mkparịta ụka dị n'etiti ọgwụ ndị a nwere ike ịkpata ọrịa ọrịa serotonin ma ọ bụ ihe mgbaàmà ndị yiri ọrịa na-arịa ọrịa neuroleptic (NMS).
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu obi na-akpata, gwa dọkịta gị otu ihe ahụ tupu ịṅụ ọgwụ ọjọọ
Nanị ọgwụ a ka a na-atụ aro ka ndị ọrịa buru oke ibu na ndị buru ibu buru ibu nke nwere BMI nke ọ dịkarịa ala 27kg / m2na njedebe dị arọ.
Ejila okwu ọnụ ma ọ bụrụ na ị dị oke ibu kama ọ ka dị obere karịa afọ 18
Ekerela òkè a na onye ozo
Nlekọta Ọgwụ na Lorcaserin Contraindications
Na-ekwu okwu n'echere onwe gị ma ọ bụ jiri nlezianya kpachara anya mgbe ị nwere ọnọdụ ndị a;
Nnukwu ntụpọ mgbagha
Nne ara na-enye nwa ara
Mmetụta dị iche iche na-emepụta ihe
Akụkọ banyere bradycardia (obere oge obi nke <50BPM)
Congestive obi ọdịda
Mgbe ịkwụsị ịgba akwụkwọ;
Ọ bụrụ na ị mepee ihe ịrịba ama nke ọrịa valvụ obi na mgbakasị obi obi
Na mmeghachi omume ọjọọ na mgbaàmà siri ike
Ọ bụrụ na ọgwụ anaghị arụ ọrụ ma ọlị, nke mere na ị gaghị achọpụta ihe ọ bụla dị iche iche mgbe ọnwa anọ gasịrị
Mgbe dọkịta gị gwara gị ka ị kwụsị
Ọgwụ ahụ na-emetụta ọnụ ọgụgụ ọbara gị gụnyere mkpụrụ ndụ ọbara ọcha, ndị leukocytes, lymphocytes, na ndị neutrocytes
Omume, echiche, ma ọ bụ omume na-aga n'ihu
N'ihe banyere nnyefere
Mmetụta mmetụta nke Lorcaserin
Dị ka ọtụtụ ọgwụ ọjọọ, o nwere ike ịkpata ụda olu. Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime mgbaàmà ndị a nwere ike ịdịru nwa oge, ha ga-apụ n'anya ka ahụ gị gbanwee ọgwụ ahụ. Ọ bụrụ na enwere mmetụta dị n'akụkụ, kpọtụrụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ozugbo.
Mgbaàmà nkịtị ma ọ bụ obere
Mgbaghara oge, na-egbu mgbu, ma ọ bụ siri ike
Nsogbu ihi ụra dị ka ihe isi ike ịda ma ọ bụ ihi ụra
Azụ ihe mgbu
Ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ
N'ọnọdụ ndị na-adịghị adị, mmetụta ndị dị na ya nwere ike ịdị njọ, ya mere, na-akpọ maka nlekọta ahụike mberede. Ha gụnyere;
Ihe eji eme ihe (ịhụ ma ọ bụ nụ ihe ndị na-adịghị adị)
Obi dị elu
Mgbanwe nke mberede gbanwere
Mkpụrụ obi, mgbagwoju anya, ma ọ bụ spasms
Amnesia (ncheta oge nchekwa)
Echiche na mgbalị na-egbu onwe ya
Aka aka, ụkwụ, ụkwụ, ma ọ bụ ogwe aka
Mkpụrụ obi na-adịghị mma (ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa)
Nsogbu na nhazi
Mmetụta nke dissociation (ịbụ nke gị ahu)
Ịba mbara nke ara na karịsịa ụmụ nwoke
Ogbugba ogbugba site na ara sitere na elu nke prolactin
Priapism (mmepụta ogologo oge ma na-egbu mgbu nke na-adịgide karịa awa isii)
Ọ bụ ezie na anyị gbalịrị ikpuchi ihe mgbaàmà ọ bụla na mmetụta ndị ọzọ nke ọgwụ nje, ị nwere ike ịnweta ihe nwere ike ghara ịdị na listi n'elu. Otú ọ dị, naanị nke a na-eme na oge ọjọọ.
N'okwu ndị dị oke njọ, hụ na ị ga-akọrọ mmetụta na Usoro FDA na-egosi na ịntanetị. Ngwunye ha dị mma bụ 1-800-332-1088.
Nchekwa nke Lorcaserin
Na-echekwa ọgwụ a na akpa a na-ehicha akàrà, nke kachasị mma n'ime arịa ọ na-abata. Chebe ya na mmiri na oké okpomọkụ. Ọ bụ ezie na enweghi ọnọdụ nchekwa ọ bụla, ọ bara uru ọ bụla dị na ọnọdụ ọkọlọtọ. 25 Celsius C zuru okè, ma ọtụtụ 15 - 30 Celsius C ka dị mma.
Ichechi ọgwụ ụfụ ọgwụ na-efu ọnwụ na ebe dị nchebe iji gbochie ịnweta ndị mmadụ na-enweghị ikike. Rịba ama na ọgwụ ahụ bụ ihe a na-achịkwa, ọ pụkwara ịmegbu ya. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ike ịbụ nsị ụmụaka ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-ewere ya n'ejighị ọgwụ dọkịta.
Nkịtị Kwesịrị Ekwesị nke Lorcaserin
Kpochapu ụlọnga dịka ihe mkpofu ọgwụ dịka iwu FDA, EPA, na DEA. Ejulata ụlọ mposi, kwe ka ọ na-asọba na mmiri mmiri, ma ọ bụ tụfuo ya. N'ịbụ onye a na-agbanye na mmiri, ịdọ aka ná ntị nwere ike ibute mmetọ.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi kpochapụ ọgwụ ahụ. Ozugbo ị kpọrọ aha ma jiri nlezianya kpoo ọgwụ ahụ, ị ​​nwere ike iji usoro nlekọta ahụike, nke gụnyere ịzaghachi ya na onye nrụpụta. Ọ bụrụ na mmemme ahụ enweghị ike ịnweta, nweta enyemaka site na ndị na-ere ọgwụ na-akwụ ụgwọ ọgwụ na-agwọ ọrịa ndị ga-ewepụ ngwaahịa ahụ ma ọ bụ lie ya na ebe a na-akwụ ụgwọ.
Nkọwapụta nke Nkọwapụta site na Mmiri
Ụfọdụ ndị nọ na Belviq ruo ọnwa isii ma ha nwere ike ịhụ mgbanwe dị ịrịba ama. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ amaola 20lbs tupu ya ejiri ọgwụ ahụ ruo afọ zuru ezu. N'ụzọ dị mwute, ọkara nke ndị a furu efu ruo 10 pound n'ime ọnwa mbụ.
N'agbanyeghị na ọ bụ onye nzọpụta nye ọtụtụ ndị, lorcaserin yiri ihe na-adịghị njọ nye ndị nta. Ebe ọ ga-ewe ọnwa zuru ezu iji laa 3lbs naanị, ụfọdụ agaghị edebanye aha ọhụụ ọ bụla. N'ụzọ dị iche, ìgwè a chere na agụụ ha na-arịwanye elu.
Mmetụta dị na ya bụ Gbanyụọ!
90% nke ndị na-enweghị ike ịmechaa ọnwa ọ bụla mgbe ha na-ekwu okwu okwu bụ ndị mmadụ na-enwe mmetụta jọgburu onwe ya site na mmetụta ndị dị na ya. Ọtụtụ ndị ọrụ agaghị anabata ụra nke ụra, obi nkoropụ, isi ọwụwa, ọgba aghara, dizziness, ọgbụgbọ, na obi mgbagwoju anya.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ ga-ahụ mgbaàmà ndị a, ndị ọrụ ole na ole egosiwo na mmetụta dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ. Ná nkezi, ọ ga-abụ ihe a na-ahụ anya n'ime izu abụọ mbụ nke ịbịakarị mkpesa. Na-akpali mmasị, banyere 2% nke ndị na-azụ ahịa ahụghị ihu ọ bụla.
Site na nyocha nke lorcaserin, 88% nke ndị ọrụ kwetara na agụụ ha adịchaghị njọ ebe ọ bụ na ha malitere iji lorcaserin. Ọ bara uru nye ndị nwere oké ọchịchọ na ndị na-eri nri uche. Ọ bụrụ na a tụnyere ntanye n'etiti òkè ndị erie tupu ha na ihe ha na-eri ugbu a, ọdịiche dị ihe dị ka ọkara ma ọ bụ obere. Ndị mmadụ ole na ole ga-amanye onwe ha ka ha rie n'ihi na ọchịchọ maka nri nwere ike ịla n'iyi ruo ọtụtụ ụbọchị.
Mmadụ ole na ole bụ ndị agụụ na-agụghị ha gbara akaebe na ọnwụ ndị ọzọ dị arọ rụpụtara ha. Nye ụfọdụ, itinye ihe omume na mmemme ha na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ibulata kama ịdabere na agụụ dị ala.
Ọ dị oké ọnụ
Ihe ntanetị 30 na-aga maka ego 330. Ụfọdụ mkpuchi anaghị ekpuchi ụgwọ ịzụta ọgwụ ahụ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, otu ga-adabere na sistemụ mmepụta nke na-emepụta na kaadị ego pụrụ iche ma ọ bụ gbakwuo n'ime akpa ha. Mgbe ị nwere obi ụtọ, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ka $ 50.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-erughị $ 15,000 kwa afọ, ị ghaghị ịdọ aka gị aka ná ntị ka ị ghara ibu ibu. Atụmatụ nlekọta-efu bụ ụzọ doro anya nke na-ehichapụ akaụntụ gị.
Ihe mgbaàmà mgbapụ
Lorcaserin nwere ike ime ka ị bụrụ onye na-eri ahụ naanị otu izu abụọ na-ewebata ya na sistemụ gị. Ndị na - akwụsị ịṅụ ọgwụ ahụ ga - enwe mmetụta ndị dị na ya.
Ntinye nke Lorcaserin
Lorcaserin bụ chemical na-eji maka ule, ọgwụgwọ, na nchọpụta ọgwụ mgbochi ibu. A na-ahazi Lorcaserin hydrochloride mgbe ụbụrụ na-emepụta mmiri hydrochloric.
A na-enye ihe a nanị na ụlọ nyocha maka nnyocha. Ọ dịghị mma maka iji mmadụ ma ọ bụ anụmanụ.
Lorcaserin dị n'okpuru aha abụọ. I nwere ike zụta lorcaserin HCL dị ka Belviq® ma ọ bụ Belviq XR® mbadamba. Ihe mgbochi na-arụ ọrụ n'ime ụdị abụọ ahụ bụ lorcaserin hydrochloride.
Ngwá ọgwụ ọjọọ a dị arọ bụ mbadamba 10mg nke a ga-ewe ugboro abụọ n'ụbọchị. Ọ bụ agba gburugburu, biconvex, acha anụnụ anụnụ, na ihe nkiri na-ekpuchi 'A' n'otu akụkụ na '10' na nkwụsị nke ọzọ. Kalama ọ bụla nwere ngụkọta nke mbadamba 60.
Udi Gburugburu; biconvex
Edebere koodu A; 10
Ọnụ ọgụgụ kwa kalama Mbadamba 60
Njirimara na-adịghị arụ ọrụ
A na-edegharị ihe ndị a iji kpochapụ ihe ndị na-akpata mmejọ na mmetụta ndị dị na ya, karịsịa n'oge mmekọrịta ọgwụ.
Nke a bụ ihe ntinye 20mg na-ewepụta otu ugboro n'ụbọchị. N'adịghị ka Belviq®, akara a na-enye mmanụ mbadamba. Otú ọ dị, ha na-agba gburugburu, biconvex, na-ekpuchi ihe nkiri, ma debe ya na 'A' n'otu akụkụ na '20' na njedebe ọzọ. Otu karama Belviq XR® nwere mbadamba 30.
Edebere koodu A; 20
Ọnụ ọgụgụ kwa kalama Mbadamba 30
Ferric oxide uhie
Ferric oxide odo
2910 Hypromellose (15 MPA.S)
Ịzụta Lorcaserin HCL Online
1. Lorcaserin efu
Lorcaserin HCL akwụ ụgwọ
Ọnụ ego nke lorcaserin hydrochloride (846589-98-8) dabere na ọnọdụ gị, ụlọ ahịa ị na-azụ na, na ọnụọgụ nke ajụjụ. Dị ka ọmụmaatụ, igwe ọka nke ngwaahịa a ga-efu gị dị ka $ 50. Otú ọ dị, ịga maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nwere ike belata ọnụahịa na 1G kwa dollar ma ọ bụ ihe dị obere.
Akara belviq nke nwere 60 capsules (Belviq XR® nwere mbadamba 30) ga-ejide gị otu ọnwa na ọ ga-efu n'etiti $ 220 na $ 330. Ọnụahịa ahụ na-adabere na mpi mkpọchi ị ga-ewere ebe ọ bụ na Belviq XR® na-akwụ ụgwọ ole na ole dollar karịa Belviq. Ụfọdụ ụlọ ọrụ mkpuchi nwere ike ikpuchi ụfọdụ n'ime ebubo ahụ, ya mere, na-ahapụ gị iji ego akwụ ụgwọ. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta ụfọdụ katọn ọkachamara na kaadị ego site na Belviq, na-eme ka ị na-akwụ ụgwọ.
2. Otu esi azụta Lorcaserin HCL
Ihe isi ike nke ịzụta Belviq bụ iwu FDA nke chọrọ ka ị nweta ndenye ọgwụ dọkịta. Otú ọ dị, ịzụ ahịa maka lorcaserin enweghị ihe mgbochi, ma ọ bụghị na ị bụ ọkachamara n'ọhịa nke nyocha.
Imirikiti ụlọ ahịa ịntanetị chọrọ ka ị deba aha ha na ha, mepee ọnụ ụzọ nke gị, ma lelee ọnụahịa. Ịnwere ike ịgbakwunye nnukwu ụgbọ ala gị ma debe iwu. Enweghị ebubo pụrụ iche maka ebubo ebe ọ bụ na HCL na-ekwu okwu nchebe maka ụdị njem niile.
Ọ bụ na-achịkwa ụlọnga?
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe na-akpali akpali, ọ ga-abụrịrị na ụlọnga na-eme ka ịdabere na ịdaba na ọgwụ ọjọọ. N'ihi nke a, Nchịkwa Ndị Na-ahụ Maka Ngwá Agha (DEA) depụtara ya n'okpuru Ụkpụrụ Omume Ejikwa Control na Nhazi IV.
Ya mere, olee otu ha si achịkwa usoro ọgwụgwọ mmadụ? Aga m akọwa. Ogbaghara nwere ike ịbụ ihe mberede ma ọ pụkwara ịbụ ihe na-akpali akpali nke na-akpali onye ọrụ ahụ. Iji mee ka ahụ dị mma, ịnwere ike ịmejupụta akwụkwọ ederede maka oge ole na ole.
Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị na-emetụta ụbụrụ na-agụnye ntinye uche, inwe mmetụta 'dị elu', ọgba aghara, ma ọ bụ euphoria. N'ọnọdụ ole na ole, ụfọdụ ndị ọrịa nke kwụsịrị ọgwụ ahụ gosipụtara ụfọdụ ihe mgbaàmà ụfọdụ. Ihe ndị a nile bụ ihe akaebe zuru oke na ọgwụ nwere ike ime ka ịdabere na mmụọ.
Ị nwere ike ịrụ ọrụ mgbe ị na-agba akwụkwọ?
A na-ejikọta ọrụ nke lorcaserin na arụ ọrụ anụ ahụ na obere kalori oriri. N'ihi na ọ bụrụhaala na ị na-ekwu okwu, arụ ọrụ oge niile kwesịrị ịbụ ụdị ndụ gị. Otu akụkụ nke ndị ji ya mee ihe na-ekwere na mmega ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa ná njem njem ha dị arọ kama ịdabere na ọgwụ ahụ.
Ndi ogwu na-enwe ihe ize ndụ n'anụ ahụ gị?
Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime mmetụta ndị ahụ dị obere ma na-apụ n'anya mgbe otu izu ma ọ bụ abụọ gasịrị, ndị ọzọ nwere ike ịdị njọ ma ghọọ ndị na-eyi ndụ egwu. Nnyocha a na-egosi na mmeghachi omume ndị a nwere obere ihe omume nke dị ala. Ya mere, ọ na-esiri ike ịkọ oge ha.
Isi ihe omuma nke United States abughi nani ihe ndi ozo banyere ihe ize ndụ nke obi na ejikoro ya na ogbagwoju ma o juputara na nchoputa ohuru. Nke a bụ nkọwa nke nsogbu ndị lorcaserin;
Nke a na-abịa mgbe ị na-ewere Belviq tinyere ọgwụ, nke na-eme ka ndị na-anabata serotonin ma ọ bụ rụọ ọrụ. Ndị ọgwụ ndị a na-agụnye ndị na-emeso ịda mbà n'obi, nsogbu uche, isi ọwụwa, na oyi nkịtị.
Echiche nke igbu onwe ya
Ọrịa ọbara dị ala na-eme nanị n'ahụ ndị na-arịa ọrịa shuga nke ụdị II. Ị nwere ike itinye ndụ gị n'ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na ị gaghị edozi shuga shuga ma gbanwee ọgwụ shuga gị.
Ọrịa ọrịa Valvular
Mkpụrụ ọgwụ Lorcaserin nwere ike ịkpata mmebi valve obi n'ihi nbalite nke 5-HT2B ndị natara. Otú ọ dị, mmetụta a nwere obere ọnọdụ n'ihi na ọgwụ ahụ nwere njikọ dị elu maka 5-HT2C karịa ndị natara 5-HT ndị ọzọ. Nnyocha na-egosi na pasent nke ndị na-eburu ndị mmadụ na ìgwè na placebo agaghị egosipụta ọdịiche dị ịrịba ama mgbe a nwalere ha maka ọrịa obi valvular.
Ịgba elu nke prolactin
Nke a bụ ọgbụgba na-egbu mgbu ga-anọ karịa awa anọ. Ọ bụrụ na agwọghị ya, ọ nwere ike ibute anụ ahụ na-adịgide adịgide.
Ego ole ka m ga-eji tụfuo ya?
Ọ bụrụ na ị na-etinye ọrụ anụ ahụ na nri dị mma maka ndụ gị, ọ ga-abụrịrị na ị ga-atụfu pound karịa. N'izu izu 12, ị ga-efurịrị ma ọ dịkarịa ala 5% nke arọ ahụ gị. Mgbe nke a na-emeghị, enweghị olileanya nke Belviq na-arụ ọrụ maka gị.
Site na lorcaserin reviews anyị nwere ike ịlele, ọtụtụ ndị na-ekwu na ha furu n'etiti 10 - 15lbs site n'ọnwa mbụ.
Ị gbalịrị Belviq ma ọ bụ ihe nhụjuanya yiri agụụ na-egbu ya ma ọ rụọ ọrụ?
90% nke nyochaa ndị ọrụ ahụ na-egosi na ọrụ ọnụ na-arụ ọrụ. Nye ndị ọzọ fọdụrụnụ, ọgwụ ahụ nwere ike ịkpata mmeghachi omume na-adịghị mma ma ọ bụ enweghị ike. N'okwu ndị dị otú ahụ, dọkịta ahụ ga-akwụsị ịgwọ ọrịa gị ma gwa ya ọgwụ ọgwụgwọ ọzọ.
Ọ bụrụ na onye nhụjuanya agụụ adịghị arụ ọrụ maka gị, enwere nhọrọ ndị ọzọ onye ọkachamara nwere ike ikwu. Dị ka ọ dị ugbu a, FDA kwadoro phentermine (Qsymia), orlistat, naltrexone (contrive), na liraglutide.
Nchịkọta Na Lorcaserin HCL (Belviq)
Ngwunye ọgwụ ọjọọ Lorcaserin bụ maka ndị ọrịa buru ibu ma buru oke ibu, karịsịa ndị na-ata ahụhụ na ndị nwere nsogbu. Nri ahụ nwere ọtụtụ ihe ize ndụ ndụ na mmetụta ọjọọ na ahụ ma ozugbo ị na-agbaso ndụmọdụ dọkịta ahụ, ị ​​ga-anọ n'udo.
Lorcaserin chọrọ ka ị nọgide na-eji ya na ndụ gị dum maọbụ dị ka ọ na-ede. Ọ bụrụ na ị na-enye onwe gị ezumike mgbe afọ nke 20lbs nwụsịrị, dịrị njikere inweta uru yiri ya na ụfọdụ pound ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọ dị oke ọnụ, ọ dị mkpa ka ị jiri akụ na ụzụ, Kupọns, na kaadị akwụmụgwọ ndị dị na Belviq na ebe nrụọrụ weebụ. Na ego ọnụahịa ga-ebelata ma ọ bụrụ na mkpuchi gị kpuchiri ụfọdụ n'ime ebubo. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịtụle ihe ize ndụ ndị metụtara na uru ahụ ike tupu ị na-eji $ 300 mee ihe kwa ọnwa.
Bohula, Erin A., Wiviott, Stephen D., McGuire, Darren K., Inzucchi, Silvio E., et al .: Obi Nchedo nke Lorcaserin na Overweight ma ọ bụ Obese Patients, The New England Journal of Medicine, 2018
Nchịkọta nri na ọgwụ ọjọọ, Ngwọta Ejiri Ogologo Ogologo Ogologo, Online, Published 17 July 2012
Ashley Gustafson, Cammile King, Jose AR, National Center for Biotechnology Information, PMC Articles, MediMedia, USA Lorcaserin (Belviq), Online, September 2013